Global Voices teny Malagasy » Manako Any Afrika Ny Fametraham-pialàn’ny Papa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2013 5:03 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika (en) i Jane Ellis, zhhantar
Sokajy: Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Angola, Cote d'Ivoire, Ginea, Ginea Ekoadaoreana, Kamerona, R.D. Kongo, Repoblikan'i Kongo, Senegal, Tanzania, Zimbaboe, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika
Niteraka fihetseham-po tamin'ny Firenena Afrikana mampiasa ny teny Frantsay, na tamin'ny haino aman-jery nentim-paharazana na tamin'ny tambajotra sosialy, ny fanambaràn'ny Papa Benoà XVI mikasika ny faniriany hiala amin'ny asany manomboka amin'ny 28 Febroary 2013. Ny fankasitrahana ny Papa miaraka amin'ny hetaheta mba hisian'ny mpitarika Afrikana sasany haka ohatra amin'ny nataony no tena fihetseham-po nibahana tao.
Ny Ray Masina,Benoà XVI. Sarin'ny Fiangonana Katolika (Angletera sy Pays de Galles) eo amin'ny Flickr, fahazoan-dalana CC by-nc-sa/2.0
Hevitra samihafa, saingy araham-piderana
Nanoratra toy izao manaraka izao [fr], ao amin'ny lahatsoratra iray feno antontan-kevitra tsara ao amin'ny bilaogy Togocouleurs mitondra ny lohateny hoe ‘Tsy maintsy tokony ho faty Papa ve ny Papa?’, i Charles Lebon:
Nivoaka toy ny vara-datsaka tanaty lanitra tony ny vaovao tamin'ny 11 febroary. Tokony ho tsy mafy loatra ny filàtsany raha toa ka nilaza izy ireo fa maty ilay Papa, ary amin'izay fotoana izay, toy ny nataon'ireo hafa, dia nampiandry teo ambany varavarankelin'ilay ray masina miala aina ireo mpanao gazety miaraka amin'ny micro, ny fakantsary, ary ny labozia. Fa tsy izany no zava-nitranga. Ny tena marina dia ny fametraham-pialan'ny mpitantana dimbin'i Piera, ao amin'ny hevitra hoe: ‘mandàny anjara ziogany’.
Nitanisa an'i Ray Jacques Seck any Dakar  [fr] ny bilaogin'i Diery Diallo :
Ambarako fa faly aho satria nanao dingana samirery ny Ray Masina (Papa Benoa XVI). Ny Olon'Andriamanitra tahaka anay […] manko tsy mba fonksionera amin'itony asa itony. Faly aho fa nanome ohatra ho antsika ny Ray Masina amin'ny maha lohan'ny Fiangonana azy. Tsy fonksionera ny Eveka, ny Kardinaly ary ny Papa, rehefa tsy afaka manohy intsony izy, omeny ny olona hafa ny toerany” hoy ny fihetseham-pon'ny Ray Jacques Seck teo amin'ny onjam-peon'ny RFM. Andeha ho tsaroantsika fa nanambara ny Papa Benoa XVI fa manan-kery ny fametraham-pialany manomboka ny 28 Febroary 2013. Ny antony narosony, ny taonany efa lehibe izay fantany fa tsy ahafahany intsony mamita ny andriaikitry ny Tompo.
Maro ireo fihetseham-po no nipetraka  [fr] teo amin'ny pejy facebook-n'ny Radio France International, maridrefy izay isan'ny maro mpihaino any amin'ny tany mampiasa ny teny Frantsay any Afrika, nandritra ny fandaharam-potoana natokana ho amin'ity tranga ity:
Maro ireo Afrikana no maniry ireo mpitantana azy ho voasinton'ny hetsika feno fahasahiana nataon'ny Papa Benoà XVI. Loharanon-tsary:
Nanoratra i Hilal Sylla  [fr] avy any Conakry any Ginea:
Na dia tsy dia manan-danja be aza izany, dia mampahatsiaro ahy horonantsary malaza izay mikasika ny fiangonana sy ny Illuminati ny fametraham-pialan'ny Papa Benoà. Fomba iray ilazàna fa tsy manana hery intsony ny fiangonana eo amin'izao tontolo feno hadalana loatra izao. Fanontaniana tokana: Efa akaiky ve ny Faran'Izao Tontolo Izao?
Ho an'i Samuel Azabho  [fr] avy any Kisangani any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo:
Tsy vaovao akory ity fametraham-pialana ity noho ny taonany. Saika tsara avokoa ny fitondrana maha-Papa azy raha toa koa ka mbola izy no fototry ny ady atao amin'ny fametavetana zaza tsy ampy taona. Mihevitra aho fa nanao fihetsika feno fandinihana izy. Ary ireo rehetra te-hanaraka azy dia tsy maintsy mahazaka ny fanamby amin'ny hoavy eo amin'ny Fiangonana Katolika, ary koa ny olombelona rehetra, na inona na inona volon-koditra sy fiaviany.
Nanamarika i Ben Mbele  avy any Yaonde [fr]:
Na izany aza azontsika atao ihany no milaza fa tsy ony tony akory ny fotoana naha-Papa an'i Benoà XVI , hatramin'ny lahateniny mikasika ny Silamo, nandalo ny tantara ratsin'ireo pretra nametaveta zaza tsy ampy taona, hatramin'ny olan'ny mariazin'olona mitovy fananahana, amin'izany rehetra izany, hitantsika fa hitoetra ho ny voalohany misava làlana ity fanapahan-kevitra miaty fnavotana natan'i Benoà XVI ity satria hiteraka adihevitra amin'ny Lalàna Canon izy ity mikasika ny fe-potoana hitondran'ny Papa, hoe hovaina sa tsia, raha ny hevitro manokana, tsy tokony hanantena foana avy amin'ny Papa vaovao isika mikasika ny famotsorana vondron'olona vitsivitsy satria ny ankamaroan'reo kardinaly amin'izao fotoana dia saika voatendrin'i Papa Benoà XVI sy Joany Paoly 2, ary tena mpandala ny nentim-paharazana.
Mihevitra  [fr] i Alpha Ulrick Marcellus  avy any Brazzville, any Kongo fa :
Feno fahasahiana ny fanapahan-kevitry ny Papa. Tsy nametra-pialàna izy fa nandà, nandà ny Andraikitry ny Masina. Tsy mora ny fanapahan-kevitra noraisiny. Raha ny hevitro manokana, isan'ny fizahan-toetra goavana ny naha-Papa azy, tamin'ny lahateny tsy miolankolaka sy manohina mafy rehefa milaza ny marina. Nanolotra ny tsara indrindra avy aminy ny Papa Benoà XVI, ho anà Fiangonana anatin'ny ady miaraka amin'izao tontolo izao izay mihalasa mivary lavo hatrany hatrany. Andeha hanantena isika fa, ny Papa ho avy eo, Andriamanitra anie no hifidy azy ao anatin'izay tsara indrindra, afaka handray fanapahan-kevitra feno fahasahiana eo anatrehan'ny kihon-dalana maro izay hamarinin'izao tontolo izao, mba hiarovana ny finoana sy ny fahamasinan'ny Fiangonana.
Nandefa fanadaharana manokana ihany koa ny BBC mikasika ny Tany mampiasa ny teny Frantsay ao Afrika, izay nalefan'ireo foibenà radio tany an-toerana. Manana mpankafy maherin'ny 17.000  [fr] ny pejy facebook-n'ny BBC mikasika an'i Afrika. Maro ireo Afrikana no nanome ny fomba fijeriny nandritra ny fandaharana mikasika ity fametraham-pialana ity teo amin'ny Africa Live  tamin'ny 16 Febroary. Nanoratra toy izao i Michel Djadji Anigbe  avy any Abidjan, Côte d'Ivoire [fr]:
Mifandraika amin'ny fanapahan-kevitry ny Papa ny hametra-pialàna, namela ahy ho sanganehana ihany ny tena antony marina. Ahoana marina moa no nanekeny, izy izay olona lalin-tsaina, ho papa miaraka amin'ireto sorona izay takian'izany? Indrindra miaraka amin'ny zavatra vitan'ny teo alohany, ny Papa hajaina Joany Paoly 2 nandritra ny fotoany. Ny tena fanampin'izany, tsotra loatra ny fiarovan-keviny manoloana ny tantara ratsin'ity mpitantan-draharahany ity. Ary indrindra rehefa hitanao hoe tsy badolahy na koa hoe tsy vahiny amin'ny zava-misy eo amin'izao tontolo izao ny ao Vatikàna.
Nametraka fanontaniana mahaliana i Didier Didou Mady  [fr]:
Mety ho azo eritreretina ve hoe holavina ny fametraham-pialan'ny Papa raha ny Lalàna Kanonika no jerena? Inona moa no maharatsy ny hoe mpizahatany tonga any Vatikana mitsidika ny Papa sy ny Papa teo aloha indray miaraka? Sarotra ny hanana Papa tsy mety vizana!
Ohatra ho an'ny mpitondra Afrikana sasantsasany?
Manana firenena maro ratsy tantana i Afrika. Misy ifandraisany ve izany amin'ny hoe teto amin'ity kaontinanta ity ihany koa no nahitàna mpitondra Firenena ela indrindra teo amin'ny fitondràna?:
Robert Gabriel Mugabe , 89, teo amin'ny fanjakana tany Zimbabwe hatramin'ny 1980
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo , 71, Filohan'ny Ginea Ekoatorialy hatramin'ny 1979
Paul Biya,  80, nitondra an'i Cameroun hatramin'ny 1982
José Eduardo dos Santos , 71, Filohan'i Angola hatramin'ny 1979
Denis Sassou Ngesso , 80, filohan'i Kongo nanomboka tamin'ny 1979 hatramin'ny 1992 ary nitohy nanomboka tamin'ny 1997
Maro ireo Afrikana no nanakiana ity fametraham-pialan'ny Papa Benoà XVI ity raha nampifandray ny zava-misy amin'izay mitranga any amin'ny kaontinantany. Nanoratra  [fr] teo amin'ny bilaoginy i Josiane Kouaghe avy any Kamerona:
Taorian'ireny disadisa ireny, tsapa ho azy ireo fanontaniana tena marina. Ary mora arahana ny fampitahana. “Hay, mampatsiaro ahy an'i Nelson Mandela izy. Tadidinao ve, tamin'ny 1999, tamin'izy nametra-pialana taorian'ny dimy taona monja?” hoy i Eric Ntomb, 64 taona, manontany ny namany. “Miresaka ianao amin'izao ry Eric! Mitovy amin'ny zavatra nataon'ny Papa ihany izany. Nanomboka tamin'ny 2005 fotsiny izy no teo. Raha mba afaka manao toy izany koa manko ireo mpitondra antsika aty Afrika”, hoy ity namany namaly niaraka tamin'ny sento lalina. Nilaza tamin'ny feo mafy ny zavatra eritreretin'ny olona an-tapitrisany maro ity namana ity. Ary sakanako ianao! Aza milaza amiko hoe nametra-pialana ny Papa satria izy olon'Andriamanitra. Tsia! Izy no nitondra ny firenena kely indrindra sy matanjaka indrindra eran-tany.
Ka dia niverenan'i Josiane Kouagheu nojerena ny lisitry ny Filoha Afrikana izay nametra-pialana tamin'ny nahim-pony:
Ahmadou Ahidjo  an'i Kamerona tamin'ny 1982
Leopold Sedar Senghor  an'i Senegaly tamin'ny Novambra 1980 tamin'ny faha-74 taonany
Julius Nyerere , an'i Tanzania, tamin'ny Novambra 1985
Na izany aza, ny tena mpitondra Afrikana nalaza indrindra niala teo amin'ny fahefana tamin'ny sitrapony dia tsy azo lavina mihitsy fa i Nelson Mandela , tamin'ny 1999, tranga iray izay nahatonga ity fampitahana teo amin'i Mandela sy ny Papa Benoà XVI ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/24/46924/
 Nanoratra toy izao manaraka izao: http://togocouleurs.mondoblog.org/2013/02/14/le-pape-doit-il-mourir-pape/
 Ray Jacques Seck any Dakar: http://dierydiallo.wordpress.com/2013/02/11/labbe-jaques-seck-sur-la-demission-du-pape-benoit-xvi-je-suis-heureux-que-le-saint-pere-nous-donne-lexemple/
 Maro ireo fihetseham-po no nipetraka: https://www.facebook.com/AppelsSurLactualite?ref=ts&fref=ts
 Samuel Azabho: https://www.facebook.com/samuel.azabho
 mpankafy maherin'ny 17.000: https://www.facebook.com/bbcafrique?ref=ts&fref=ts
 Robert Gabriel Mugabe: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mugabe
 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo: http://en.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Obiang_Nguema
 Paul Biya,: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Biya
 José Eduardo dos Santos: http://en.wikipedia.org/wiki/José_Eduardo_dos_Santos
 Denis Sassou Ngesso: http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Sassou_Nguesso
 Ahmadou Ahidjo: http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadou_Ahidjo
 Leopold Sedar Senghor: http://en.wikipedia.org/wiki/Léopold_Sédar_Senghor#Au_S.C3.A9n.C3.A9gal_.281960_-_1981.29
 Julius Nyerere: http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Nyerere